Home /Blog/Dowladda Itoobiya oo diidan in Soomaaliya yeelto Madaxweyne ka soo jeeda Beesha Daarood
Announcement,Featured,Somali News |
Wararka naga soo gaaray magaaladda Addis-Ababa ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in shirar illa maalintii khamiista uga socda magaaladaas Madaxweynayaasha Maamul goboleedyadda qaarkood sida Hir-Shabelle Cali Cabdulaahi Cosoble, Koonfur-Galbeed Shariif Xasan Shiikh Adam iyo Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed cadaadis xoog leh lagu saaray inay ka shaqeeyaan sidii meesha looga saari lahaa in Soomaaliya ay doorto Madaxweyne ka soo jeeda Beesha Daarood.
Qaar ka mid ah madaxda la socda wafdiga hogaamiyeyaasha ka qeyb galaya shirka ka socda Itoobiya ayaa sheegaya in qorshaha ugu weyn yahay sidii looga adkaan lahaa Madaxda ka soo jeeda beesha Daarood inay noqdaan Madaxweyne Dowladda Federalka ee Soomaaliya.
Warar hada soo dhacayaa oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya wafdigii maamul goboleedyada ee ku sugnaa Addis Ababa dawlada Itoobiya ay ku cadaadineeso in ay ka soo hor jeestaan Madaxweyne beesha daarood ah.
Dhinaca kalena, waxaa socda qorshe dhaqaale badan ay ku bixinayso dowladda Itoobiya oo ah in gabi ahaanba meesha laga saaro rajadda ah in Madaxweyne ka soo jeeda beesha Daarood uu Soomaaliya hogaamiye u noqdo, iyadda oo taasi ay tahay mid shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iska weydiinayaan su’aalo badan.
Wixii ku soo kordhaa kala soco PN24